Frankofonia : hanohana ny BFV-SG | NewsMada
Vita sonia, omaly ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny banky BFV-SG sy ny mpikarakara ny fivoriamben’ny Frankofonia, andiany faha-16, hatao eto Madagasikara amin’ity taona ity. Nambaran’ny filoha tale jeneralin’ity banky ity, Bruno Massezfa manan-danja amin’izy ireo ny teny frantsay, anisan’ny fitaovana ilaina amin’ny fampandrosoana, toy ny toekarena, ohatra. Raha ny fanadihadiana, ho lasa teny voalohany ampiasaina maneran-tany ny teny frantsay amin’ny taona 2030 hatramin’ny 2050.
Mifanakaiky amin’ny Cop 22
Nilaza ny delege jeneralin’ny fanomanana ny frankofonia, Rajaobelina Mamy, fa tafiditra ao anatin’ity fiaraha-miasa ity ny hanasongadinana bebe kokoa ny banky BFV-SG sy ny frankofonia amin’ny lafiny serasera samihafa.
Nanome fanazavana koa izy amin’ny antony nanemorana herinandro ny fanombohana ny fivoriambe. Tapitra ny 18 novambra 2016 ny fivoriambe iraisam-pirenena mikasika ny tontolo iainana Cop 22 hatao any Maraoka, ka mifanakaiky loatra ny fotoana noheverana hanombohana ny Frankofonia ny 19 novambra.